कुलमान घिसिङ भइञ्जेल प्राधिकरण सबस्टेसनको प्यानलबोर्डमा नपसेको मुसा अहिले कसरी पस्यो ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कुलमान घिसिङ भइञ्जेल प्राधिकरण सबस्टेसनको प्यानलबोर्डमा नपसेको मुसा अहिले कसरी पस्यो ?
काठमाडौं । केही दिनयता देशभरि विद्युत झ्याप्प झ्याप्प गइरहन्छ । कहिले त १२–१४ घन्टासम्म पनि विद्युत आउँदैन । प्राधिकरणको नो लाइट शाखामा फोन गर्दा ९० प्रतिशत फोन नै उठ्दैन । नभए व्यस्त बनाएर राखिन्छ । दुई साताअघिसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ हुँदा यसरी बत्ती जाँदैनथ्यो । गइहालेमा पनि तुरुन्तै आउँथ्यो । नो लाइटमा तुरुन्तै रेसपोन्स हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्था र’हस्य’मय देखिएको छ ।
देशभर तारान्तर बत्ती गइरहन् र भारतबाट इन्भर्टर, जेनेरेटर र ब्याट्रको आयात गरिनुले कतै चाँडै मुलुकमा लोडसेडिङ त हुन लागेको होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बत्ती छैन । बाहिरी जिल्लाको अवस्था त भन्नै परेन । आज गएको बत्ती भोलिसम्म पनि आउँदैन ।
धेरै समयसम्म बत्ती नआएपछि सेवाग्राहीले गरेको गु’नासोमा प्राधिकरणले सबस्टेसनमा मुसा पसेर यस्तो अवस्था सिर्जना भएको रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ ।
कुलमान घिसिङ चार वर्षसम्म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नपस्ने मुसा अहिले कसरी सबस्टेसनमा पस्यो भनेर जनताले सरकारसँग जवाफ माग्न थालेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले हावाबाट पनि कोरोना भाइरस सर्ने प्रमाणित भएको स्वीकार गरेको छ